Umshini wokuvelisa iYZU
Umshini wenkunkuma yinto entsha, esebenzayo, ecocekileyo, enoqoqosho kunye nenqanaba elincinci elisebenzisa umoya ophefumlelweyo ukuvelisa uxinzelelo olubi, olwenza ukuba kube lula kwaye kube lula ukufumana uxinzelelo olubi apho kukho umoya oxineneyo okanye apho kukho uxinzelelo oluqinisekileyo nolubi. iyafuneka kwinkqubo yomoya. Ii-vacuum generator zisetyenziswa ngokubanzi kumatshini wokuzenzekelayo, njengoomatshini, izixhobo zombane, ukupakisha, ushicilelo, iiplastiki kunye neerobhothi.
Amacebo okucoca ulwelo aqokelela izinto ezingcolisayo (ubukhulu becala uthuli) oluvela emoyeni ukukhusela ungcoliseko lwenkqubo kwaye zisetyenziswa phakathi kwekomityi yokutsala kunye nejeneretha yokufunxa (okanye ivelufa yokufunxa). Izinto eziza kufakwa ngaphakathi ziya kufakwa kwizibuko leemoto, i-suction port (okanye i-port ye-exhaust) yevalve yokufunxa kunye ne-exhaust port yokupompoza.
Umshini wokufunxa, okwabizwa ngokuba sisasazi sokucoca, yenye yezixhobo zokucoca izixhobo. Ngokubanzi, ukusetyenziswa kwemveliso yokufunxa indebe yokubamba iimveliso yeyona ndlela ingabizi kakhulu.Ii-sucker ze-vacuum ziindidi ezahlukeneyo. Iirubber suckers zinokusebenza kubushushu obuphezulu. Iikomityi zokwenza izinto ezenziwe nge-polyurethane zihlala ixesha elide. Ukongeza, kwimveliso yokwenyani, ukuba ikomityi yokufunxa iyafuneka ukuba inganyangeki ngeoyile, kunokuqwalaselwa ukusebenzisa izinto ezinje nge-polyurethane, i-nitrile butadiene irabha, okanye iipolymers ezine-vinyl yokwenza ikomityi yokutsala. thintela umphezulu wemveliso ukrwitshiwe, olona khetho lufanelekileyo lwenziwe ngerabha ye-nitrile okanye ngerabha yesilicone enokutsalwa kwendebe ngezinto ezenziwe ngerabha ye-nitrile, inamandla amakhulu okukrazula, ke isetyenziswa kakhulu kwizixhobo ezahlukeneyo zokufunxa.
Umoya womoya kumacandelo abalulekileyo, indlela yolawulo lwendlela eya kwicala elinye. Rhoqo kulungiswa phakathi kwesilinda kunye nokubuyisela umva ivalve, ukuze umoya okwisilinda ungadluli kwisheyiphu ebuyisa umva kunye nevalve ekhutshwe ngokuthe ngqo.
Iplastikhi yokutsala iplastikhi njengoko igama lisitsho ukuba luhlobo lokutsala, ngokuhambelana nesakhiwo sinokuhlulwa sibe yibhulorho yokutsala kunye nokuvalwa ngokupheleleyo kweplastikhi; Ngokutsho kwemodeli, inokwahlulahlulwa ibe yityathanga elincinci, ikhonkco ngokubanzi kunye nelikhulu Ngokuhambelana nomlingani wengxolo onokwahlulwahlulwa ngokwetyathanga eliqhelekileyo lokurhuqa kunye nothe cwaka wokudonsa; Ngokwendlela leyo inokwahlulahlulwa ibe yityathanga lokurhuqa eliqhelekileyo, ikhonkco lokutsala elingqinelanayo, uhlobo lwe-S lokutsala; Ngokwempahla Iphakheji yeplastiki yentsusa kunye neplastiki esetyenzisiweyo, njl.
Uxinzelelo lwesilinda ekwabizwa ngokuba yirhasi-yolwelo exinzelelweyo yesilinda
Uxinzelelo lwesilinda ludityanisiwe kunye nezibonelelo zesilinda kunye nesilinda kunye nokuphuculwa koyilo, ioyile ye-hydraulic kunye nokuzahlula okungqongqo, umoya oxineneyo kunxibelelwano lwesilinda se-piston emva koqalo lomsebenzi ngokuzenzekelayo, isantya sentshukumo, uzinzo, kunye nesixhobo somoya sokuhambisa ibhokisi silula , uhlengahlengiso lokuphuma lula, unokufikelela kumandla aphezulu e-hydraulic press kwiimeko ezifanayo, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukufika kokuthamba akubonakalisi ukungunda, kulula ukuyifaka kunye nokufaka isilinda ekhethekileyo yoxinzelelo kunokuba ngama-360 degrees nakweyiphi na iAngle, indawo ekuhlalwa kuyo encinci, ukungasebenzi kakuhle kokunyuka kwamaqondo obushushu, ubomi obude, ingxolo ephantsi, kunye nezinye izinto eziphambili.